I-Arsenal ivikele amalungelo okuziqhayisa eNorth London ngokunqoba I-Tottenham ngamagoli amabili kwelilodwa | Scrolla Izindaba
I-Arsenal ivikele amalungelo okuziqhayisa eNorth London ngokunqoba I-Tottenham ngamagoli amabili kwelilodwa
I-Gunners iqale iqinile lapho ihlangana ne-Tottenham, kuphele lapho ibona khona u-Erik Lamela eshaya i-‘rabona’ enesibindi ngokubhekana nomdlalo eyinikezwe iqembu likaJose Mourinho ithuba lokuhola ngokuhlasela kwabo kokuqala emdlalweni.
Uhlangothi lukaMikel Arteta liqhubekile nokuphoqa umdlalo futhi laqala ngendlela yomdlali wasesiswini obolekiswe ngemali uMartin Ødegaard kusasele imizuzu ngaphambi kokuba kuphele isiwombe sokuqala
Umdlali wase-France u-Alexandre Lacazette unikeze i-Gunners ukuhola ngemuva kokushaya iphenathi ngemuva kokuthi uDavinson Sánchez ehlise uLazazette ngokungadingekile ngemuva kokuthi eselisikile ithuba lakhe.
Ngemuva kwekhadi lesibili eliphuzi, uLamela ushiye inkundla kodwa yize sebeshoda ngomdlali oyedwa, i-Spurs iqhubekele phambili futhi umdlali uHarry Kane ube negoli elingavunyelwe ngokuba ku-offside.
Lokhu kunqoba kuka-Arteta bekungokokuqala ebhekene noJose Mourinho, njengomdlali noma umphathi. I-Spaniard izokujabulela kakhulu ukuthi ekugcineni izothola imenenja ehlotshiswe kakhulu.
Isiphetho semidlalo emihlanu yokunqoba kwe-Spurs sesifike emaphethelweni futhi bahlala endaweni yesikhombisa esicongweni se-Premier League, ngamaphuzu ayisithupha emaqenjini amane aphezulu. I-Arsenal ihleli endaweni yeshumi naphezu kokunqoba kodwa manje isele ngamaphuzu amane kuphela ngemuva kwamadoda kaMourinho.
Womabili amaqembu abuyile emdlalweni kule mpelasonto ezayo ne-Gunners izobhekana ne-West Ham kanti i-Spurs izobhekana ne-Aston Villa. Womabili amaqembu kufanele anqobe ukukhuphula amathuba okudlala e-Europe ngesizini ezayo.
Umthombo wesithombe: @ Football.London